ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်းကိုသက်သေခံသည့်ရထားများ - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံသကျသခေံရထားလမ်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူ
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TCDD 0
အောက်တိုဘာလအတွက်ရရှိနိုင် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan, Raillif မဂ္ဂဇင်း၏နံပါတ် "ရထားလမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံသက်သေခံထူထောင်မှု" အမည်ရဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်အဖြစ်။
၏ TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာ၏မိန့်ခွန်းသောသင့်လျော်သော
"3 နှစ်ပေါင်း ထိုအချိန်မှစ. ကူးမြောက်İzmir-Aydınလိုင်းအတွင်းပထမဆုံးလေ့လာမှုများ၏ 1856 စက်တင်ဘာလ 163 ခုနှစ်တွင်စတင်။ ဤပြည်၌စစ်မှမီးရထား, လွတ်လပ်ရေးနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ပွဲ, ငြိမ်းချမ်းရေး, ငါတို့အသစ်သောပြည်နယ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမျက်မြင်သိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အခက်အခဲအကျပ်အတည်းများ, တူရကီအတွက်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအသက်တာ၏သမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်နှင့်အတူလွတ်လပ်သောပြည်နယ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးပြီးနောက်နီးပါးရထားလမ်း၏အနာဂတ်ထဲကပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းအပေါငျးတို့သမရှိခြင်း, ကီလိုမီတာရထားလမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် 1950 3.764 နှစ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်နည်းပညာမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်း။ 1950 2003 ကီလိုမီတာကနေတစ်နှစ် 945 ကတည်ဆောက်ခဲ့သည့်မီးရထားလမ်း၏အရှည်နေ၏။
အချက်ပြခြင်းနှင့် 2003 နှစ်ပေါင်း, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ, R & D လှုပ်ရှားမှုများ, မြို့ပြရထားလမ်းစနစ်များအနေဖြင့်တည်ဆဲလိုင်းများလြှပျစစျမီးကျနော်တို့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားနှင့်အတူပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးထုတ်လုပ်မှုဘို့ငါတို့တိုင်းပြည်တွင်အရေးကြီးသောစီမံကိန်းများကိုရဖို့ကျနော်တို့သစ်တွေရဖို့ဆက်လက်။ ကျနော်တို့ရဲ့မူလရထားလမ်းဘူတာရုံငှါ, တိုးမြှင့်ခရီးသည်ဝယ်လိုအားမှာသစ်ကိုခေတ်မီမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားဘူတာရုံနှင့်အညီတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လျော်သောဘူတာပွနျလညျထူထောငျင့်တဲ့အခါမှာသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှင့်အတူသွားကြသည်။
"မီးရထားနိုင်ငံ၏လက္ကား, ထိုရိုင်ဖယ်ကနေလက်နက်ပိုပြီးသိသာထင်ရှားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုပါပဲ။ " သူက Mustafa Kemal Ataturk ကဦးဆောင်, ငါတို့လမ်းအပေါ်ဆက်လက်အဖြစ်ယုံကြည်မှုနှင့်အတူအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံများ 163 နှစ်ပေါင်းပိုမိုတည်ငြိမ်သစ္စာရှိသောပေးထားယနေ့ railways ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံ, ဤအတှေးနဲ့ခံစားခကျြမြားနှငျ့ 96 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအားလုံးသူရဲကောင်းများကျေးဇူးတင်လျက်သတိရလိမ့်မယ်, တစ်နှစ်တာကိုဂုဏ်ပြုသော။ "
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: IZMIR ဆင်ခြေဖုံး Line ပြောင်းလဲခြင်း SYSTEM ပင်ALÜMİNOTERMİT ray, ၏အထီးကျန် THE ကတ်ကြေးအထီးကျန်မှုတွေတံဆိပျကိုအစားထိုးနဲ့အတူကူပွန်နဲ့မမှန်ကန်ကြောင်းဂဟေ AND Ray Ray ခံရဖို့ ... 12 / 03 / 2012 အထီးကျန်အထီးကျန်မှုတွေနဲ့အတူကူပွန်တံဆိပ်ခတ်အစားထိုးနှင့်ပင်အလုပ်မှာဖျော်ဖြေ၏ALÜMİNOTERMİT ray အရင်းအမြစ်အတွက်ကတ်ကြေးနဲ့မမှန်ကန်ကြောင်းဂဟေ AND Ray Ray BE တင်ဒါအသိပေးစာ IZMIR ဆင်ခြေဖုံး Line ပြောင်းလဲခြင်း SYSTEM ။ TCDD စီးပွားရေး IZMIR3။ အဆိုပါဒေသန္တရရုံး: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: 2012 / 25635 အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေး: တစ်) လိပ်စာ: TCDD xnumx.bölgညွှန်ကြားမှုAtatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ:3/ A 121 Alsancak / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 352200232 464 31 / 31 -42690232 464 77 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါအင်တာနက်ကိုလိပ်စာပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: နုမှဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အမည်နှင့်အရေအတွက် www.malzeme.tcdd.gov.t: Izmir ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အော်တိုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ကျမ်းပိုဒ်အတားအဆီးစနစ်၏တည်ထောင် 25 / 06 / 2015 အော်တို switching အတားအဆီးစနစ်က TCDD2သတ်မှတ်ပေးရန် tools များတည်ထောင်။ တစ်ဝိုက်ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး2ဒေသန္တရရုံး Bower AND BIG လမ်းပေါ်မှနိဒါန်း TO သို့2PCs CAR AUTO PASS, DESCRIPTION Barrier စနစ်ကိုတည်ထောင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 70303 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 06005 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3122111571 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: mehmethanifiogut@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောအင်တာနက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်မှတ်တမ်း လိပ်စာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အော်တိုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ကျမ်းပိုဒ်အတားအဆီးစနစ်၏တည်ထောင် 30 / 11 / 2015 အော်တို switching အတားအဆီးစနစ်က TCDD2သတ်မှတ်ပေးရန် tools များတည်ထောင်။ ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး SERVICES ညွှန်ကြားရေးမှူး2ဒေသန္တရရုံး Bower AND BIG လမ်းပေါ်မှနိဒါန်း TO သို့4PCs CAR AUTO PASS, DESCRIPTION Barrier စနစ်ကိုတည်ထောင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 160559 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 06005 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3122111571 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: mehmethanifiogut@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းမြင်နိုင်ပါသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ယာဉ်အသိအမှတ်ပြုခွန်ကောက် Barrier စနစ်တည်ထောင် 23 / 08 / 2016 TCDD2၏ယာဉ်အသိအမှတ်ပြုခွန်ကောက် Barrier စနစ်တည်ထောင်။ ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး SERVICES ညွှန်ကြားရေးမှူးxnumxbölgညွှန်ကြားမှုပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ2အပိုဒ်အရသိရသည်2စုစုပေါင်းယာဉ်ဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေးအသိအမှတ်ပြု Barrier စနစ်တည်ထောင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်2အမှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှ Pavilion နှင့် Biga-4734 လမ်းဝင်ပေါက်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2016 337193-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 1 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 06005 - 3123090515 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: mehmethanifiogut@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောအင်တာနက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်မှတ်တမ်း ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပန်းချီပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပျက်စီးသွားသောအဓိက Broken ပတ်ဝန်းကျင်က Wall Yaptırılacaktırအတူ Montee မယ့်အစားအဘယ်သူ၏ပြုပြင်နှင့်အတူသံ Grid သံ Making 10 / 07 / 2013 သံအစွန်းအထင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူပြုသောအမှုများနှင့် Broken ပတျဝနျးကငျြက Wall Yaptırılacaktır TCDD6၏ပြုပြင်ရေးနှင့်အတူအဓိကကွန်ယက်ပျက်ဆီးနေသောသံ Montesi အစားထိုး။ အဆိုပါသံကွန်ယက်ဖော်ဆောင်ရေးနှင့်အမှတ်တရYaptırılacaktır၏ပြုပြင်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 4734 အမှတ် 19 အပိုဒ်အားဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ Broken အတူ Montee အစားထိုးအတူပျက်စီးသံအဓိကပတ်ဝန်းကျင်၏ဒေသန္တရရုံးဆေးဆိုး။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 88611 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: လွတ်မြောက်ရေးရပ်ကွက်Atatürk Caddesi 01240 SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224575354 ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: IZMIR ဆင်ခြေဖုံး Line ပြောင်းလဲခြင်း SYSTEM ပင်ALÜMİNOTERMİT ray, ၏အထီးကျန် THE ကတ်ကြေးအထီးကျန်မှုတွေတံဆိပျကိုအစားထိုးနဲ့အတူကူပွန်နဲ့မမှန်ကန်ကြောင်းဂဟေ AND Ray Ray ခံရဖို့ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ယာဉ်အသိအမှတ်ပြုခွန်ကောက် Barrier စနစ်တည်ထောင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပန်းချီပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပျက်စီးသွားသောအဓိက Broken ပတ်ဝန်းကျင်က Wall Yaptırılacaktırအတူ Montee မယ့်အစားအဘယ်သူ၏ပြုပြင်နှင့်အတူသံ Grid သံ Making
လူမှုသမဝါယမပညာရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးရထားတူရကီနှင့်အတူဒုတိယအ Stop ရောက်ရှိ